Ny fahadalana sy ny fahendrena
Vakio ny Ohab. 1. Araka ny voalaza ao, tokony hiompana amin'ny inona ny tena fanabeazana kristianina marina?
Mampitaha ny fahadalana amin'ny fahendrena mandrakariva ny Baiboly. Tsara tokoa ny ampahatsiahivan'ny bokin'ny Ohabolana antsika ny amin'ireo fitondrantena tsy hendry sy ny fiarahana amin'ny adala, izay mety hampidi-doza. Mazava tsara ny tsy fitoviana eto: tian'Andriamanitra hikatsaka fahendrena ny olony, handala izany ary hampitombo izany ao aminy.
Mampiasa ny talentany ny mpianatra momba ny haikanto sy ny siansa mba hampitombo ny fahalalany sy hisondrotany ambony kokoa hatrany amin'ny fianarany. Toy izany koa ireo mpampianatra izany taranja izany. Azontsika atao ny ho tonga havanana amin'ny haikanto sy hahataka-javatra ara-tsiansa noho ny fahalalana sy ny fahaizana ananantsika.
Araka ny fomba fijery kristianina anefa, inona no tena liana ny fahalalana momba ny haikanto sy ny siansa raha toa ka tsy hay akory ny manavaka ny mety amin'ny tsy mety, ny tsara amin'ny ratsy, ary ny marina amin'ny diso? Jereo fotsiny ohatra ny fiainan'ireo izay heverina fa mpahay zavakanto malaza indrindra eto ambonin'ny tany mba hahitanao fa ny fananam-pahaizana sy talenta lehibe dia tsy midika velively ho fananana fiainana tsara sy mahitsy. Azo lazaina ihany koa fa manan-talenta sy fahaizana ambony ireo mpahay siansa malaza, amin'ny lafiny famoronana fitaovam-piadiana biolojika sy simika matanjaka dia matanjaka; kanefa inona moa no voka-tsoa entin'ny asan'izy ireo? Araka ny voalaza teo aloha, raha ny fahalalana fotsiny ihany, dia tsy voatery ho zavatra tsara.
Vakio ny Ohab. 1:7. Ahoana no anambaran'io andininy io ny amin'izay zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana kristianina?
Olona iray nahazo loka Nobel, izay tsy mino ny fisian'Andriamanitra, ary nianatra momba izao rehetra ary izao sy ny hery fizika ao anatiny no nanoratra hoe: "Arakaraka ny toa ahatakarantsika ny momba izao rehetra ary izao no ahitantsika izany ho tsy misy heviny." Tsy tokony hilaza amintsika ve izany fa ny fahalalana, raha tsy misy an'Andriamanitra, dia tsy misy dikany ary mitondra ho amin'ny fiheveran-diso mihitsy aza?